Dib u eegid: toddobaad leh Firefox OS | Laga soo bilaabo Linux
auroszx | | Aplicaciones, Lagu taliyay
Ka dib markii aan ka degay Spain iyo Poland, Firefox OS yimid halkan Venezuela (horeba Kolombiya) wadaha Movistar.
Waxaan ka faa'iideystay xaqiiqda ah in hooyaday ay dooneysay inay cusbooneysiiso duuggeeda Nokia 2118, maxaa yeelay naftayda (ama naga dhig, hehe-ootay) a Alcatel One Taabashada Dabka. Maantana, toddobaad kadib markii la isticmaalay, waxaan u imid inaan wax yar ka qoro waxa socda Firefox OS.
In kasta oo dib-u-eegista oo dhan aan isbarbar dhigayo Firefox OS-ga Android iyo iOS, kuwaas oo ah aaladaha kale ee aan haysto oo aan ra'yigayga ka dhiiban karo, ma aha mid gebi ahaanba ansax ah in la isbarbardhigo sababo la xiriira marxaladda hore ee horumarka ee Firefox OS laga helay.
Hagaag kooxda aan iska leeyahay waa Alcatel One Taabashada Dabka, qalab aad u yar. Waxay kugula talin laheyd Geeksphone Keon (telefoonka horumarinta rasmiga ah) haddii aad raadineyso meel-hoose, laakiin midkani wuxuu si fiican u fuliyaa ujeeddada.
Processor: Qualcomm Snapdragon MSM7227A (Cortex-A5) @ 1GHz
GPU: Adreno 200 (wanaajiyay)
ROM / RAM memory: 512MB (160MB for applications), 256MB
Shaashad: TFT 3.5 ″, qaraar 320 × 480
Isku xirnaanta: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G
Dareemayaasha: U dhawaanshaha, Laydhka, Wareegga
El Dabka OT dhajisaa processor-hoose-dhamaadka caadiga ah, loo isticmaalo aaladaha kale sida LG Optimus L5 ama Sony Xperia J, Iyadoo uu weriye u yahay GPU.
Qof kastaa wuxuu odhan lahaa xusuustiisa wuu ku yar yahay, laakiin Firefox OS uma baahna xusuus aad u badan (ROM iyo RAM labadaba) inay si fiican u shaqeeyaan. Shaashadu waxay leedahay tayo la aqbali karo, isku xirnaanshaha iyo dareemayaashana waa kuwa ugu yar ee loo baahan yahay Firefox OS.
1 Firefox OS? Taasi miyaa la cunay?
2 Dawacooyinka dabka, androids cagaaran iyo penguins ayaa umuuqda inay is fahmi karaan
3 Qaab dhismeedka nidaamka
4 Dareenka koowaad waa muhiim
5 Muuqaal: qurux iyo bahal midna
6 Khadadka udhaxeeya webka iyo codsiyada xirmada leh
7 Raadinta firfircoon: sirdoonka awoodda
9 Jabsiga iyo habeynta: gaarsiinta Gaia
10 Amniga iyo asturnaanta
Firefox OS? Taasi miyaa la cunay?
Kuwa aan aad uga warqabin, Firefox OS (asal ahaan loo yaqaan B2G ama Boot 2 Gecko) waxaa ku dhashay hindise ah Mozilla y Telefónica in la abuuro nidaam mobilada ku shaqeeya ku saleysan tikniyoolajiyadda webka. Ujeeddadu waxay ahayd in la abuuro nidaam furfuran, miisaan fudud, dheecaan, iyo nidaam horumarineed oo saaxiibtinnimo leh.
Ka dib muddo sanad iyo badh ah oo horumarineed, isla markaana soo maray dhawr aaladood oo tijaabo ah, ayaa lagu sii daayay labada aaladood ee ganacsi ee ugu horreeya: ZTE Open y Alcatel One Taabashada Dabka. Kuwani waxay la yimaadaan nooca 1.0.1 de FxOS, inkasta oo nooca ugu dambeeya ee xasilloon yahay 1.1.0 (diyaar u ah hadda qalabka tijaabada, iibka dhamaadka sanadka) iyo 1.2.0 ayaa ku jirta horumar.
Dawacooyinka dabka, androids cagaaran iyo penguins ayaa umuuqda inay is fahmi karaan
Xawaaraha nooca ugu horeeya ee FxOS waxaa sabab u ah wax aad muhiim u ah: K-gaagaLinux waa nooc hoos loo dhigay laga bilaabo Kernel Linux ka Android.
Markaan sidaas irina, waa sababta oo ah waxay dhab ahaan ku saleysan tahay version 3.0 Xargaha la jaan qaadaya ICS -ka Android, ama wixii intaa ka sii badan, sidoo kale waxay ku habboon tahay darawalada noocaas ah.
Taasi waa, in lagu saleeyo Android 4.0, waa la jaan qaadayaa Dardargelinta GPU iyo dhamaan wadayaasha / modullada noocaas ah (sida Swap ama zRAM).
Xaqiiqdii, haddii aad leedahay aqoonta lagama maarmaanka ah iyo darawallada, waa suurtagal dekedda Firefox OS qalabka keena Android (iyo taa lidkeed).
Kuwa ugu awooda badan sida Nexus 4 o Galaxy S2, xitaa kuwa ugu fudud sida LG Optimus L5 (jidka ag fadhigiisu yahay, horey ayaa loogu soo dejiyey kuwan oo koodhku wuxuu diyaar u yahay inuu soo ururiyo Github).
Waad geli kartaa boosteejada Firefox OS Iyada oo loo marayo ADB (Buundada Debugging Android), iyo socodsiiso amarrada guud sida cat o ls (Linux, ka dib oo dhan).
Qaab dhismeedka nidaamka
Nidaamku wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood oo muhiim ah:
Gecko: magaca ayaa u dhawaaqi doona mid la yaqaan. Waa mashiinka mas'uulka ka ah bixinta Gaia (taas oo ah, dabcan, sida bogga) iyo maareynta WebAPIs iyo rukhsadda oggolaanshaha. Waxay sidoo kale xakameysaa amniga nidaamka.
Socda: waxaa ku jira Linux Kernel, wadayaasha iyo Qalabka Abstraction Layer (HAL).
Dareenka koowaad waa muhiim
Animation xawaaladaha Firefox OS, dawacada dabadeeda waxay u dhaqaaqdaa sida dab 🙂
Marka ugu horeysa ee aad bilowdo nidaamka, waxaad ogaaneysaa sida iftiin taas oo runti ah. Waxaad arkeysaa qaar ka mid ah animations bilawga laakiin fudud oo soo jiidasho leh, iyo (ugu yaraan OT Fire) waqtiga bilowgu wuxuu ku saabsan yahay Saacadaha 40.
Isla marka aad dhameysid bilowga waxaad arki doontaa shaashad quful oo leh saacad, adeegaha, iyo tab hoose. Waxaan tabeynaa tabka waxaanan aragnaa laba badhan: a helitaanka degdegga ah ee kamaradda iyo a badhanka si aad u furto.
Waxaan ku ciyaarnay qeybta dambe, iyo qaab animation ah gabaabsi desktop ayaa u muuqda.
Kaamirada iyo badhanka fur.
Miiska wuxuu leeyahay saddex qaybood: izquierda, karaadinta firfircoon"(markaa waan sharxayaa waxay ku saabsan tahay); meel banaan oo saacad dul saaran xarunta (Waxaan u maleynayaa inaan si cad u arko sawirka gidaarka); Haddana sax waa wada codsiyada rakibay.
Miiska ayaa aad loogu xasuustaa macruufka, inkasta oo ay ku badan yihiin calaamadaha wareega gaar ah.
Raadinta firfircoon ee dhinaca bidix.
Shaashadda xarunta, ku nadiifi saacaddaada.
Haddaan hoos u riixno xaalad bar hoos, a xarunta ogeysiinta aad ugu eg Android: taariikhda, hawlwadeenka, liiska ogeysiisyada, badhan laga wada saarayo dhammaantood, oo ka hooseeya badhannada qaarkood si aad u dhaqaajiso oo aad u joojiso isku xirnaanta isla markaana u furto liiska dejinta Waxaas oo dhan, sidaan horay u idhi, ayaa lagu sameeyey HTML5 + CSS3 + JS.
Aagga ogeysiinta. Hoos waxaa ku qoran miiska xogta iyo dejimaha.
Muuqaal: qurux iyo bahal midna
In yar markaan aad u sii dhaadhacno waxaan aragnay in muuqaalka codsiyada uusan aad uga duwaneyn wixii aan ku baran jirnay. Baarka cinwaanka, oo leh badhanno si aad ugu laabato shaashaddii hore ama u fuliso falalka; iyo shaashadda inteeda kale halka lagu soo bandhigo waxa ku jira dalabka.
Nidaamka midabka asalka ah waa oranji / cawl leh cadaan, laakiin horumariyayaashu waxay wax ka beddeli karaan ilaha ku jira barnaamijyadooda si ay u abuuraan qaabab kala duwan.
In kasta oo aysan ahayn muuqaal kacaan, waxay u oggolaaneysaa dhowr ka mid ah xulashooyinka sida nidaamyada kale: liisaska, tabs, menus ikhtiyaariga ah, baararka hoose, baararka wareegga, raadinta, iwm. In kasta oo ay run tahay inay leedahay cillad naqshadaysan oo saamayn ku leh adeegsiga nidaamka.
Browser-ka Firefox lama waayin.
Khadadka udhaxeeya webka iyo codsiyada xirmada leh
Qodobkani waa muhiim. Ugu talagal, Firefox OS waxaa ku jira codsiyada muhiim ah taleefanka casriga ah: buugga cinwaanka, SMS, muusigga muusiga, kamaradda, sawir gacmeedka, kalkuleytar, dukaanka barnaamijka, khariidadaha (Nokia HALKU Khariidadaha, iyadoo jidka ag fadhida), Twitter, Facebook iyo xitaa a mitirka isticmaalka xogta (kaas oo ku dhex jira aagga ogeysiinta, in kastoo halkaa aad ku aragto oo keliya isticmaalka xogta moobiilka).
Laakiin waxaa jira barnaamijyo sida Twitter y Facebook, kuwaas oo aan la helin rakibay laakiin iyagu waa Codsiyada Webka. Xitaa haddii aan yeelno Suuqa Firefox, waxaan kaliya ku rakibi karnaa taas: toobiye loo maro nooca mobilada ee bogga.
Waa waxoogaa niyad jab ah iyada oo la ogyahay sida ay u fududahay iyaga inay bogaggaas mobilada ah u rogaan barnaamijyo (ku dar faylasha qaar, wax ka beddel bogga wax yar si ay u hesho nidaamka APIs kuna dar taageerada appcache ee HTML5 ama IndexedDB ee tweets). Waxyaabaha waa isku mid xitaa xitaa ciyaaraha qaarkood, iyo codsiyada kale.
Maxaa dhacaya waa in Firefox OS ay jiraan 3 nooc oo codsiyo ah:
Codsiyada Webka: waa codsiyo caan ah oo hadda socda, oo aan weydiisan rukhsad ka baxsan kuwa HTML5 (sida loola macaamilayo shaashadda, ama xitaa barnaamijka).
Codsiyada mudnaanta leh: codsiyada leh rukhsad si loo helo Firefox OS WebAPIs, tanna waa in la saxiixo oo laga soo dejiyo Suuqa.
Codsiyada la xaqiijiyay: Sida kuwa mudnaanta leh, laakiin waxay ku yimaadaan horay loogu rakibay qalabka. Waxay sidoo kale yeelan karaan rukhsad xitaa ka sii badan, waxaana loo isticmaali karaa inay si toos ah ula falgalaan nidaamka.
Tusaale ahaan kuwii hore ayaa ah Juegos iyo barnaamijyadooda Twitter y Facebook. Tan dambe, waxay u noqon kartaa a Faylka Xawilaadda (u baahan ogolaansho si aad u aqriso ama aad wax uga beddesho kaarka SD). Marka saddexaadna, waxay noqon kartaa dalabka isticmaalka, oo imanaya horay loo rakibay, ayaa lagu dhex daray Gaia waxayna sidoo kale nidaamka ka heshaa macluumaad ku saabsan inta xog ee soo gala ama ka baxda shabakad kasta.
Noocyada ogolaanshaha ka sakow, waxay kaloo noqon karaan:
Codsiyada la marti geliyey: waa uun fayl muuqda oo tilmaamaya URL-ka barnaamijka lagu martigeliyay server-ka qaarkood. Haddii barnaamij laga sameeyay boggan, waxay noqon kartaa sidaas 🙂
Barnaamijyada xirmooyinka leh: waa xirmo .zip ka kooban dhammaan ilaha (HTML, CSS, JS, muujinta, iwm.) inuu ka shaqeeyo khadka. Taas macnaheedu waxa weeye in aysan u baahnayn in internetku shaqeeyo, in kasta oo laga yaabo in la helo macluumaad uu adeegsadaha u baahan yahay.
Iyadoo taas lagu xisaabtamayo, barnaamij sifiican looga sameeyay Twitter noqon lahaa buuxiyey iyo lahaa mudnaanta ku filan si ay u helaan ka goobta, Soo dir ogeysiisyada y keydi tweets macluumaad duug ah iyo shaqsiyeed keyd ku jira si ay ula falgalaan iyada offline.
Inta badan codsiyada nidaamka wali uma dhameystirna sida aad jeceshahay. Tusaale ahaan, xulashooyinka maqan ee soo dejinta / kala soocida / xiriirada kooxda, dejinta SMS / MMS, albums-ka galabtamadadaalo in ay taageerto tafatirka iyo saamaynta, laakiin ma ahan albums ... moodooyinka maanta ...), koontaroolo xoogaa horumarsan oo loogu talagalay kamaradda, iwm. Waxaan rajeynayaa inay ku dari doonaan nusuusta mustaqbalka.
Maqnaanshaha codsiyada caadiga ah sidoo kale waa dhibaato, sida kiiska ku jira Whatsapp. Haddii aan rabno iyo haddii kaleba Whatsapp haddii aad go'aamiso caannimada nidaamka maanta, oo aad dejiso arjiga (aragti ahaan) ma noqon doono mid aad u murugsan sidoo kale.
Raadinta firfircoon: sirdoonka awoodda
Horaan u sheegay «raadinta firfircoon«. Aaggan wuxuu ka kooban yahay laba shay: marka hore, a raadsadey dusheeda Marka labaad, a liiska barnaamijyada shabakadda horay loo qeexay loona kala saaray nooc ahaan. Waxaan diirada saari doonaa mashiinka raadinta.
Tani maahan mashiinka raadinta guud: halkii lagu tusi lahaa xiriiriyeyaal / bogag la xiriira waxaad raadineyso, tus Codsiyada Webka inay ku siin karaan adiga waxyaabaha aad raadineyso. Si fiican ayaan isu sharaxaa. Aan dhahno waan raadinayaa «Linux":
Marka mashiinka raadinta ayaa isbadal ku sameeya waraaqda gidaarka wax la xiriira waxa aan raadinayo.
Haddaan taabto tusaale ahaan ... Twitter:
Kadib waxay i tusaysaa waxyaabaha ku jira boggaas oo ku saabsan waxa aan raadinayo.
Guud ahaan nidaamka ma aha wax dhib badan. Waxyaabaha ku wareegaya desktop-ka adigoo sibibixinaya, furaya barnaamijyada adigoo taabanaya astaamahooda, ku soo noqoshada miiska adigoo riixaya badhanka taabashada shaashadda hoos u dhig ama xiro adigoo badhankaas adoo riixaya korna u riixaya. Iyo inaad dhex mushaaxdo shaashadaha dhexdooda, waxaan leenahay badhano, fureyaal koonayaasha ama menus-ka dhinaca si aan u aragno xulashooyin badan. Fudud oo dhakhso badan.
Wax haddii aan u arko wax la yaab leh waa taas, in kastoo aan haysanno Firefox sida biraawsar, ma soo dejisan karno faylasha, ama badbaadin sawirada. Kuuboodhka si fiican buu uga jawaabaa, wuxuuna keenaa astaamo fara badan. Waxaan jeclaan lahaa inay ku daraan ikhtiyaariga ah isticmaalka a T9 kiiboodhka alfanbiruumarka ugu talagal ahaan, maadaama ay caawin lahayd dadka ka imanaya taleefannada gacanta, ama yaa ku adag in la isticmaalo a QWERTY keyboard cabirka shaashadda.
Sidoo kale, sababo la yaab leh awgood, shucaaca iftiinka iftiinka kama dhimayo dhalaalka shaashadda markuu ku jiro otomatik ah. Cilad software ah oo la hagaajin karo. Iyo fallaaraha menu-yada iyo badhannada ayaa xoogaa ka weynaan kara, mararka qaarkoodna ay adag tahay in la riixo. Jawaabta shaashadu xoogaa way liidataa. Shaashaddu aad uma badna, laakiin nidaamka aan weli si fiican u habeynin tilmaamaha.
Qalabkan suubban Firefox OS wuxuu leeyahay waxqabad hufan. Sidii aan idhi intuusan nidaamku si dhakhso leh u bilaaban, codsiyada waxay furanyihiin waxayna kudhacayaan dhowr ilbiriqsikuleyl iyo qabow labadaba).
Xagee hadaad dareento gaabis, waa markaad ku dhex socoto menusyada qaarkood, ama aad horay / gadaal ugu socotid codsiyada. Xitaa on desktop waxaad ku arkeysaa xoogaa gaabis ah. Markaad wax baareyso, waa la ogaan karaa oo keliya inta boggu socdo, ka dibna marinku waa la aqbali karaa dhowr tab.
Bog furaha ayaa u muuqda si fiican u taageer heerarka, laga yaabee inay ka fiican yihiin nidaamyada kale.
Waa inaan sheegaa inaanan jeclayn adeegsiga habka maaraynta sidaas macruufka: markii uu baxayo barnaamijku wuxuu kusii jiraa qarsoon, oo waxay ku shaqaysaa oo keliya asalka hadaad leedahay adeeg dheeraad ah adeegsiga hawl gaar ah.
Laakiin waqtiga rarka ee barnaamijyada, ma xuma. Waxay ila tahay inay la kulmayaan hadafkii waxqabadka. Kama hadli karo waxqabadka ciyaarta, maadaama aysan jirin ciyaaro wali dalbanaya. Laakiin ciyaaraha fudud si fiican ayey u shaqeeyaan.
Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso haddii xasuusta muxuu leeyahay aaladdalabada ROM iyo RAM) aad ugama yara Firefox OS. Hagaag maya, runti maahan. Nidaamku wuu yar yahay, iyo codsiyada ku jira HTML5 waxba kama qabtaaninta badan ee aan isku dayay waxay ka hooseeyeen 512KB, kaliya cayaaraha waxay ahaayeen dhowr MB). ah RAM waa ku filan tahay, waxa ugu yar ee loo baahan yahay, iyo 2 ama 3 barnaamij ayaa isku wakhti furan kara.
Kuwa xiiseynaya wax farsamo badan, iyagoo adeegsanaya amarka bisad / proc / meminfo (lagu fuliyay ADB) Waxaan ka helay macluumaad Isticmaalka RAM: ee 256MB, u dhow 75MB ayaa loo qoondeeyay nidaamka, iyadoo laga tagayo waxoogaa yar 180MB inta soo hartay, oo aan lahayn barnaamijyo furan ayaa jira 40MB bilaash ah.
Waa ku filan tahay, nidaamkuna kuma xanuunsado. Waxaan sidoo kale helay macluumaad ku saabsan xusuusta gudaha: nidaamku wuxuu leeyahay qayb ka mid ah 200MB (kuwaas oo adeegsada 154MB gudaha FxOS 1.0.1), qaybta ah / khasnado xirka 40MB (hada taydu waxay isticmaaleysaa 1MB) iyo xogtu waxay ku saabsan tahay 160MB (oo aan u adeegsanayo 24MB).
Waxaa jira meel badan oo bilaash ah, maxaa yeelay gudaha Android qaybinta xogta waxaa loo isticmaalaa in lagu keydiyo keydka Dalvik VM. Halkaan waxaan uga fogaaneynaa "dhibaatada" sababo muuqda awgood 😉
Hadda, oo ku saabsan nolosha batteriga ... Way ka badan tahay ama ka yar tahay wixii aan ku haystay aniga Android, waxaa laga yaabaa in wax yar ka yar. Xaqiiqdii halkan waxaan filayay wax badan. Nidaamku wuxuu leeyahay qaab awood kaydineed oo wada joojiya dhammaan isgaarsiinta, waxaana loo qaabeyn karaa inuu si otomaatig ah u hawlgalo marka batterigu ku jiro boqolkiiba cayiman. Ma jiro wax cajiib ah halkan.
Jabsiga iyo habeynta: gaarsiinta Gaia
Iyada oo ku saleysan tiknoolajiyada Webka, hubaal waxay leedahay a habayn aad u ballaaran heerka isdhexgalka. In wax laga beddelo muuqaalka adoo faylasha wax ka badalinaya dhibaato weyn ma ahan. Feylasha ayaan nidaamka kaga saari karnaa ADB, wax ka beddel, waan joojinaynaa Gaia, waxaan soo bandhigeynaa feylasha cusub, waxaan bilaabaynaa Gaia taasna waxaan horeyba u arki karnaa isbeddelada.
Iyo markaad isticmaaleyso linux-kernel de Android, waxaan ku dari karnay xulashooyin boodboodka, Bedelanayaan, cufan, iwm Kadib wax ka beddel Gaia, kudar liiska xulashada tan iyo voila. Waxaan sidoo kale badali karnaa Gaia CSS animations kuwa cusub oo aan halkaas ka helno. Dhamaan kahadlida aragtida, ilaa iyo inta aan ogahay wax sidan oo kale ah laguma dhaqmin. Qiyaas intee in le'eg ayaad sameyn kartaa haddii aad sameyn lahayd Customka ROMs ????
Haddii aad rabto inaad aragto tusaale wanaagsan oo ah waxa lagu qaban karo Gaia, hubi xidhiidhkan de Hillaacyada Mozilla, halkaasoo ay ku dareen kumbuyuutarka hawl inuu ka dhaqaajiyo dulqeeraha aagga qorista isagoo si fudud ugu dul dhacaya kumbuyuutarka (Waxaan la yaabay sida ugu dhakhsaha badan ee wax looga qaban karo).
Amniga iyo asturnaanta
Amniga iyo arimaha gaarka ahi waa arimo kulul waayadan dambe markaa waxaan isku dayi doonaa inaanan wax isku darin dabka. Shaqadaasi waxay ka timid nano.
Barta shabakaddu ma aha mid aad u ammaan badan, oo ragga ka soo jeeda Mozilla taas way ka warhayeen. Marka si loo ilaaliyo Firefox OS, ayaa qaaday tallaabooyin kala duwan oo ku saabsan heerka Gecko, mishiinka mas'uulka ka ah bixin Gaia iyo codsiyada.
Sidii aan ku iri bilowgii, Gecko maamusha WebAPI -yada, kaas oo kuu ogolaanaya inaad isticmaasho astaamaha telefoonka sida Goobta, Kaydinta, iwm Codsi si loo helo kuwaas oo isdiyaari,, waa inaad haysataa ogolaansho lagu aasaasay muuqda, wuuna saxiixay Mozilla. Sidoo kale waa qasab in lagu muujiyo muuqaalka waxa loo baahan yahay rukhsadda, si aan loogu isticmaalin ujeeddo kasta oo waxyeelo leh.
Si looga hortago barnaamij wax ka beddel muujintaada lagu rakibayo, laba tallaabo oo waaweyn ayaa la qaadaa: kaliya barnaamijyada horay loo sii rakibay ayaa marin u heli kara qaybaha nidaamka, iyo dhammaantood barnaamijyada mudnaanta leh waxaa lagu keydinayaa gal shaqsiyeed leh UUIDyada (haa, lambarro lamid ah kuwii loo adeegsaday darawalada adag).
Koodhkaasi wuu ku kala duwan yahay barnaamij kasta iyo qalab kasta. Taasi waa, haddii barnaamij mudnaan leh uu ku guuleysan lahaa inuu marin u helo nidaamka, weli waa inuu qiyaasaa halkaa waxaa jira muujintaada, hubinta noocyada faylasha. Weli, waa wax aan la dareemi karin markii dib loo eego Mozilla.
Marka barnaamijku u baahdo rukhsad API gaar ahaan, tusaale ahaan, kan ah goobta, waxay noogu digeysaa farriin shaashadda ku socota aqbal ama diid.
Haddii aan mar dambe dooneyno inaan bedelno, waxaan fureynaa goobaha, waxaan aadeynaa "Ogolaanshaha App«, Halkaasna waxaan ku siin karnaa rukhsadaha aan rabno.
Qiyaasta ugu dambeysay ee la qaaday waxay ahayd in la suuro galiyo a ciideed halkaas oo dhammaan barnaamijyadu ay socdaan. Ka ilaali xogta hal codsi in kuwa kale u adeegsadaan ogolaansho la'aan (buskudka, furaha sirta, iwm.).
Haddii hal barnaamij uu u baahan yahay inuu ku dhammaystiro hal ficil mid kale, wuxuu si fudud ugu yeerayaa xuduudaha ku habboon, halkii uu ficil ahaan keligiis ku fulin lahaa xogta dalabka.
Tusaale ahaan, haddii barnaamijku u baahdo marin u hel dadka aad la xiriirto, waxay kuu jeedin doontaa «ventana»Laga soo bilaabo arjiga Xiriirrada si aad mid ka dooratid, halkii aad ka wada codsan lahayd nidaamka ka dibna aad halkaas ka dooran lahayd.
Waxaa sidoo kale jira faahfaahinta arimaha gaarka ah. In kasta oo ay jirto fursad lagu soo gudbiyo warbixinnada cayayaanka Mozilla, Waxay leeyihiin sidaas macluumaad shaqsi ah looma diro (ugu badnaan dalka). Intaa waxaa dheer, waxaan ku leenahay ikhtiyaar menu-ka goobaha kaas oo lagu dhex daray nidaamka, «caanka ah»Ha la socon«. Haddii aan karno, tani kaliya ma saameyneyso biraawsarka, laakiin sidoo kale dhammaan barnaamijyada websaydhka.
Nidaam cusub, xilligii tartamayaasha kale ee badan ay horumarsan yihiin, waxay ku bilaabatay aasaas deggan. Ku salaysnaan Kernel-ka Android Linux dammaanad qaadaya horumarka joogtada ah.
Marka la jaleeco, nidaamku wuxuu la kulmaa filashooyinkiisa: interface si fudud loo isticmaali karo, waxqabad hufan, celcelis ahaan nolosha batteriga, iyo codsiyada aasaasiga ah
Waan jeclahay habka loo qaybiyo loona xakameeyo codsiyada, iyo mashiinka raadinta firfircoon ayaa runtii waxtar leh (haddii ay u shaqeyso sida Google Now, waxay noqon kartaa mid aad u xiiso badan). Waxay sidoo kale leedahay fursado habeyn ballaaran, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ka faa'iideysato.
Haddii aan wax ka caban lahaa, waa run in waxqabadka iyo nolosha batteriga ay ka fiicnaan karaan, waxaana jeclaan lahaa inaan arko is-dhexgal ka duwan kuwa kale.
La'aanta codsiyada durba ku jira meheradaha kale, waxay ila tahay aniga in la xallin doono waqti ka dib marka nidaamku helo caan. Waxaan ku rajo weynahay inay gaari doonto kana sare mari doonto tirtiray WebOS, taas oo aad isugu egayd iminkana ah il furan.
Soo koobid: codka kalsoonida. Loogu talagalay dhagaystayaasha bartilmaameedka ah (suuqyada soo koraya ama dadka aan wali yeelan taleefan casri ah), waxay u hogaansantaa dhibaato la'aan.
Waa hagaag, iyada oo ku saleysan waxaas oo dhan, waxaan kuu daayay qiimeyn:
Aniga iima muuqato wax xun, laakiin waxay leedahay waddo dheer oo in la maro. Isaga Alcatel One Taabashada Dabka (oo waxaan filayaa sidoo kale ZTE Open) qorsheyso inaad hesho 2 ama 3 nooc dheeraad ah, tan iyo Mozilla Uusan qorsheynin inuu isbedelo waaweyn ku sameeyo waqtigaas.
Waxaan rajaynayaa inaad jeceshahay dib u eegista, oo haddii aad su'aalo qabtid saf saf oo hoosta uga tag faallooyinka 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Dib u eegid: toddobaad leh Firefox OS
143 faallooyin, ka tag taada
Dib u eegis fiican !! Waxaan sidoo kale doonayay inaan fiiriyo Mobile-kan OS, waxa aan aad u jeclaa ayaa ah inuu dareemayo fudeyd aad ufarabadan, waa qalab "soo gal" walina wuxuu sifiican ugu shaqeeyaa shaqadiisa.
Waxaan rabaa inaan sugo Ubuntu Telefoon, sidoo kale rajo weyn ayaan halkaas ku qabaa, mashiinka java Android ayaa aad ii caajisay, inkasta oo aanan u badalin macruufka, Windows Phone waxaan ka maqlay waxyaabo yaab leh oo la xiriira waxqabadka, inkasta oo anigu shaqsiyan aanan lahayn awooday inay tijaabiso.
Waad ku mahadsantahay wadaagista
Daaqadaha guud ahaan waxaan ka maqlay waxyaabo layaab leh, hadday tahay MS dartiisa, waxay ii sheegeen inay daaweyso kansarka iyo AIDS-ka, iyadoo la furayo liiskeeda (waan ka xumahay, ma hayaan xD)
SI GUUL AH Mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee aan ku arkay DesdeLinux. Dib u Eegid Fiican ...
Mahadsanid, mahadsanid, aad baad u mahadsan tahay ^^ Waqti ayey qaadatay laakiin wey u qalantay.
dib u eegis aad u wanaagsan, hambalyo, runti waa raaxo, koofiyad baan iska siibay.
Waxaan la yaabanahay haddii lagu rakibi karo S3. Waxaan qorsheynayaa inaan u beddelo tan ama CyanogenMOD
Sidaas ayaan u maleynayaa. 😉
Arrintu way xoogaa adag tahay darawallada Exynos CPU (weydii CyanogenMod ...), laakiin waxay u muuqataa in haddii http://brain.cc.kogakuin.ac.jp/research/fxos-e.html
Telefoon kasta oo leh lambarkaaga sirta ah ee Android 4.0 waa inuu awoodaa inuu maamulo 🙂
Maya mahadsanid. Waxaan ku dhacaa CM
Aad u fiican, si fudud u fiican. Waxaan ku arkay qabyo qoraal oo afkeygu wuxuu waraabinayay si aan u aqriyo isagoo dhameystiran iyo sawiro. Hambalyo.
Runtu waxay tahay OS-ka kaliya ee aan ugu jeclaa dhamaadka-hoose waa windows windows ... waa wax aad u fudud, dhamaadka-sare ma jiro cid i qancisa, macruufka iyo Android aad ayey isugu egyihiin .., aad iyo aad ayaan u jeclahay.
Windows Phone, si dhab ah? Isku day FirefoxOS adiguna waad ii sheegi doontaa haddii aad weli isku fikir tahay 😉
Markaad haysato mobiil leh 800 x500 xalka ugu yar, waa maxay barnaamijka iyo codsiyada badan, muuqaalka fiican (hadda waxay umuuqataa mid fool xun ..), ugu yaraan 5 kamarad Megapixel iyo wixii la mid ah, waan isku dayi doonaa.
Taasi hadda dambe-hoose ma aha.
Heerka hoose waa mobiil ka yar 200 oo euro, lumia aan xuso waa 140 euro. heerka dhexe waa inta udhaxeysa 200/400 iyo sare iyo waxkasta oo dhaafaya 400 euro.
Laatiin Ameerika (ugu yaraan, Peru), awoodda wax iibsigu kuma filna xitaa mobilka 130 euro ugu badnaan (haddii aan kuu sheego Qorraxda Cusub taas oo ah lacagta maxalliga ah, waxaad jebineysaa madaxaaga inaad cagaha u beddeleyso euro). Kaliya 110 euro waa waxa aan u aragno bartanka-dhexe, maaddaama heer sare ah, waxay haddaba u dhexeyn doonaan 120 euro iyo wixii ka dambeeya.
Horay ayaan ugala hadalnay hada kahor, waana inaad haysatid fikrado yar oo lagudaray oo kusaabsan waxa udhaxeeya hoose, jooji doqonimada xD
Ciyaaryahan kubbadda cagta dijo
Kala duwanaanshaha mobiladu way ku kala duwan yihiin hadba dakhligaaga qofkiiba, haddii aad nasiib u yeelato inaad ku noolaato waddan ilaaliya dakhliga qofkiiba $ 1000, waxaad u huri kartaa $ 25 bishiiba, muddo laba sano ah si aad u beddesho boosteejada ($ 2) si aad u iibsato mobilada aad ugu jeceshahay ... maxaa la yiraahdaa qiimaha amortized. Haddii aad aniga i jeceshahay oo aad qariso $ 600 bishii, waxaad sii deyneysaa Iphone 35-dii sanoba mar wixii ka soo kordhana waxaad ku iibineysaa terminaalkaagii hore qiyaastii $ 2-300. Haddii aad tahay 450 gurigaaga… Malaynaysaa midkee midka kale ah? Xaqiiqdii, 2 Iphone-ka oo ah qiimaha mid ka mid ah, marwooyin socodsiiya inaan leenahay dheelitir!
Nasiib darrose, waan fahamsanahay in saacadaha oo dhami aysan gelin $ 1000 bishii, xitaa $ 500 ...
Haddii aan ku qiimeyno terminal-dhamaadka-sare $ 25 bishii mushahar ahaan $ 1000; Waxaan haynaa mushahar $ 500 ah oo u dhigma doona $ 12,5 bishiiba sidaas darteedna haddii mushaharkaaga ama dakhligaagu uu yahay $ 250, muddada u dambeysa ee u dhiganta waxay noqonaysaa $ 6,25: wax aan ka yarayn $ 150 !! !
Sida caadiga ah, way fududahay in la kala saaro $ 25 iyo $ 1000 in ka badan $ 6,25 laga bilaabo 250 ... sidaa darteed anigu waxaan la jiraa @ pandev92; $ 120 waxay u dhigantaa haysashada terminal-dhamaadka-sare.
Waxa noo ah soo galitaan ama kala duwanaansho aasaasi ah ayaa laga yaabaa inay tahay tan ugu fiican xaafadda xaqiiqda fudud ee ah inay cusub tahay oo uusan furin milkiilahiisa hanka leh.
Ku jawaab To Topolotas
Waxaan u maleynayaa in intaa ka yar ama ka yar waxaad raadineyso ay tahay halkaan: http://www.geeksphone.com/es/ Waxa aad sheegeyso dhammaad-hoose maahan, laakiin weli waa jira. Arrinta WhatsApp, waxaan markhaati u ahay in codsigu soo bixi doono (haddii uu jiro Symbian, maxaa yeelay waxba iyaga kuma kiciyo mid FxOS ah ...).
Waxaan mar horeba rabay inaan arko taleefan awood yar sida midka aan wato WP8 (ama 9 markuu soo baxo).
Hadday tahay mid hooseeya, in ka yar 150 euro.
Ma laha astaamo dhammaad hoose. Dhamaadka-dhamaadka hadda waa ARMv7 ama Cortex-A5, oo leh 512MB oo RAM ah iyo 3-4 ″ bandhigyo sida ugufiican. Waxaan ku dhejin lahaa Lumia mid dhexdhexaad-hoose ah (ha ahaado heerka ugu hooseeya ee WP maxaa yeelay ma jiro casriga kale oo ka casrisan oo ka itaal yar, waa wax kale).
Maanta waxay ii sheegeen kaftan: «Muxuu Darth Vader ku hayaa qaboojiyaha? Hagaag, 'Ice Cream madow' !!! » Inta udhaxeysa taas iyo waxaad hada qortay, waxay kadhigeen maalintayda mid raaxo leh
Windows Phone light ... Allahayow!
Ma aadan isticmaalin taleefanka daaqadaha sida muuqata….
Dib u eegis aad u fiican, waxaan jeclaan lahaa mid sidan oo kale ah markii Ubuntu Edge soo baxo
Ku jawaab webx21
Ubuntu Edge aad ayuu uga qaalisan yahay, dabcan, waxaa loogu talagalay dhamaadka aad u sarreeya .. Kaliya fiiri sawirada waxa ay damacsan yihiin inay iibiyaan .. Cajiib.
Hagaag, haddii qof bulshada ka mid ahi bixin karo wax ka badan $ 800, taas oo ah waxa ay noqon doonto mid qiimo leh marka uu suuqa aado (ugu yaraan), ka dib ku soo dhawow dib u eegista xD
Waxaan rabaa in aan badalo nokia markii aan cusbooneysiiyo waxay dooneysaa in lagu rakibo Skype, Microsoft Office. Maya, taasi ma noqon karto, waxaan rajeynayaa inay tahay nidaam bilaash ah oo u furan iskaashi lala yeesho firefox a.
Waxaad u qaadanaysaa si khaldan: Nokia waxay gacansaar la leedahay Microsoft. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad ka iibsato moobayl nooc kale.
Iyo sidoo kale, haddii ay run tahay, maqaalka waa mid aad u wanaagsan.
+10 horeyba loogu jeclaa
AurosZx, waxaad tahay dib u eegis adag, heer sare ah, dhameystiran, fudud, bilaa xishood been ah, isku dheelitiran oo aad iyo aad u sawiran waxa ku saabsan FirefoxOS. Waxaan ku hanbalyeynayaa kuna mahadnaqayaa maadadan xirfadeed.
Hadda, su'aal qof walba u taal: Ma jiraa nooc laga heli karo mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee aanuu bixin Movistar?
Waxaa jira Geeksphone Keon iyo Peak, waxay ka yimaadeen horumariye laakiin waxaan u maleynayaa inaysan iib aheyn. Waxaan sidoo kale helay zte u furan iibka ebay US / UK ee 80USD.
Keon iyo Peak waxaa loogu talagalay horumariyeyaasha, haa, laakiin waxaa jira Peak + suuqa macaamiisha, sida ay yiraahdaan, horayna waa loo sii iibiyay.
Waa inaan bilaabaa raadinta! Mahadsanid aan la arki karin15 y nano
Dib u eegis aad u wanaagsan ilaa aad ka muujiso »WhatsApp haddii ay go'aamiso caan ka ahaanshaha nidaamka maalmahan» taas oo ah qadarin shakhsiyeed, miyaad si dhab ah uga walwalsan tahay inaad haysato codsi ku saleysan Mareykanka sida maanta ay wax yihiin?, Waxaan haystaa Android iyo anigu ma isticmaalo WhatsApp, maxaa intaas ka sii badan, haddii aan ka saari karo dhammaan barnaamijyada Google mobilka anigana waan ka saari lahaa, haddii kale waxaan ku raacsanahay aragtidaada mustaqbalka ee Firefox OS ay tahay inuu ka hadlo, waayo hadda waa sifiican ayuu kubilaabay.
Ku jawaab burjaan
Marka ay timaado faafin, codsiyada runtii way ka muhiimsan yihiin nidaamka laftiisa (ogow inaan kaliya ka hadlayo aragtida shacabka).
Waa maxay waxa ugu horreeya ee uu qofku raadiyaa marka uu shido moobilkiisa cusub? WhatsApp, Facebook, Youtube, iwm. Ma haysto iyaga? Waxtar ma leh. Taasi way fududahay
Gaar ahaan waxaan aad u soo jiitay Firefox OS laakiin ma isticmaali doono maxaa yeelay waxaan si xoogan u adeegsadaa codsiyada sida CalenGoo, Evernote iyo Spotify oo aan ka jirin Suuqa Firefox, iyo si kasta oo nidaamku u fiicanyahay iyo inta aan jeclahayba. naqshadeynta, oo ku saleysan Linux, oo leh teknolojiyada webka iwm, iyada oo aan la helin codsiyada maalinlaha ah aniga waxba iima tarayso.
Marka la soo koobo, AurosZx waa sax, codsiyada waxay go'aamiyaan caan ka ahaanshaha nidaamka iyo WhatsApp ayaa ah kan ugu matalaya maanta.
Marka la soo koobo, AurosZx waa sax, codsiyada ayaa go'aamiya caan ka ahaanshaha nidaamka iyo WhatsApp ayaa ah kan ugu matalaya maanta. »
Muxuu sidaa u leeyahay maxaadse u taageertaa? Viber wuxuu sameeyaa isla WhatsApp oo kuma saleysna USA, saldhiga aad adigu caan ahaan iigu isticmaasho ansax ma ahan maxaa yeelay waa wax shaqsiyadeed, codsiyada aad raadineyso (Facebook, YouTube, iyo laga yaabee iwm) on a taleefanka gacanta Ma xiiseeyo waxa barnaamijyadooda maqan? hehehe xaqiiqda Firefox OS waa mid bilow ah, anigu sidoo kale ma isticmaali doono, taasi waa sababta aan ula socdo noocyada dib u eegista si aan u ogaado goorta sida dhabta ah aan u qaato sidii nidaamka mobilka ee aan ku shaqeeyo.
Ma ogtahay in taadu tahay qadarin shaqsiyadeed? Adiga ayaa sidaa leh tu ma isticmaashid WhatsApp iyo maxaa tu waxaad doorbideysaa Viber qofka sababo u gaar ah, laakiin kama hadlayno waxa ay yihiin afar bisadood oo jecel laakiin waxa ay doorbidayaan suuqa ayaa tilmaamaya, suuquna wuxuu noo sheegayaa in ku dhowaad 300 milyan oo qof WhatsApp ay tahay waxa jira oo aysan si fudud u iibsan doonin moobil aan ku rakibi karin.
Aan idinla wadaago xiriir:
Ma jecli kubbada cagta laakiin taas ayaa la yidhaa GOOL 😀
Dulucda, Burjans, waa inaad ka tirsan tahay qowmiyad laga tiro badan yahay oo aan dan ka laheyn taas, ereyada qallafsan (iyo adigoon ku xumeyn) adiga ama aniga, ma xisaabeyno. Way fududahay, si kasta oo aan u dhahno "intaas waan ku noolaan karaa" waxaan nahay jajabyo fudud, kala firdhin yar oo iyaga ka mid ah oo buur dhinaceeda ah haddii aan isbarbar dhigno inta badan dadka isticmaala caadiga ah ee olimikada laga diirmay haddii WhatsApp ay tahay martigaliyay USA.
Viber isaguna ma sameeyaa? Answer Jawaab daacad ah? HAA iyo yaa daneynaya? Muxuu fiicanyahay barnaamij isku mid ah sameeya laakiin asxaabteyda midkoodna uusan isticmaalin? Aasaaska caanku waa tirada dadka isticmaala, taasi waa sababta uu Facebook muhiim ugu yahay isticmaaleyaal badan, maxaa yeelay inta badan saaxiibadood ayaa adeegsada waana habka ugu wax ku oolka badan ee ay ku wada xiriiraan ... Waxaan WhatsApp saaray daboolka maxaa yeelay wada sheekaysiga facebookga Waxaan haystaa 80% saaxiibbaday oo isku xidhan markasta 20% kalena waxay ku jiraan Hangouts.
Marka, marka la soo koobo (oo la caddeeyo in aanan doonaynin inaan ku xadgudbo) qaddarintaada shaqsiyeed kuma lahan saamaynta ugu yar odhaahda ah in barnaamijyada caanka ahi ay nidaamka ka dhigayaan mid caan ah 😉
Waxaan ka hadlayaa qaab guud. Ma dhahayo ma jiri karaan waxyaabo kale, gaar ahaanna wax xumaan ah kuma lihi arjigaas ... Waxaan ka badbaaday sanado (aniga iyo jirkeygii hore ee Sony Ericsson J100i) barta SMS-ka / E-maylka, waan sii wadan karaa. Haddii aan ka walwalsanahay qarsoodigeyga, sida ay dad badani qabaan, oo waxaan kor u qaadey fikradda ah (sidaada oo kale) inaan ka tago adeegyada Google. Laakiin kuwani way igu qanacsan yihiin, hadda waxaan sii wadayaa sidii hore.
Haddiise aadan ogeyn, wakiil ahaan, dhammaantood waad wada saari kartaa oo waxaad raadsan kartaa beddelaadyo kale (Play Store> F-Droid, Maps> OsmAnd, GTalk> jTalk jabber, iwm), inay jiraan wax badan 🙂
Waxaan rajaynayaa inaadan dareemin xumaan ama wax la mid ah, salaan 🙂
Kama xumaan, haba yaraatee, sida dhowr qof yiraahdeen, maqaalku waa mid aad u fiican, laakiin dhammaan codsiyada la'aanta ah ee Firefox OS ay leedahay dhalashadeeda waxaad diirada saartay WhatsApp, dhanka kale taleefankayga ayaa la socda Android, nidaam la abuuray by Google, codsiyada (Gtalk, Gmail, ect) ayaa jira xitaa haddii aanan isticmaalin, ma doonayo inaan ka saaro iyaga maxaa yeelay moobiilka kaliya ee aan haysto ayaa jaban 😀
Muniir aqaa (@muniir_aqaa) dijo
Dheryo aad u fiican, ujeedo badan, ujeedooyin, kaliya dhowr waxyaalood in la cadeeyo, muuqaalka waxaa loo sameeyay si la mid ah waxa Android iyo iOS ay yihiin si dadku aysan ugu adkeyn oo ay tahay inay bartaan waxyaabo cusub, waxyaabo kale, waxaan fursad u helay inaan isku dayo labada koox ganacsi ee Venezuela (ZTE OPEN iyo Alcatel One Touch Fire) iyo feker ahaanteyda ZTE OPEN waxay leedahay waxqabad wanaagsan, labadaba dhanka taabashada iyo waxqabadka wanaagsan ee codsiyada, Alcatel wuxuu kaliya umuuqdaa mid kafiican codka iyo kamarada.
Waxa kale oo aad xustay in mustaqbalka ay samayn karaan Custom ROMs, FirefoxOS oo leh koodhka dadweynaha waxa la raadinayo ayaa ah in horumariyayaashu ay leeyihiin fikrad si toos ah loogu daro horumarinta nidaamka.
Jawaab Jonathan (@motiongeek)
Xaqiiqdii, ROM kasta oo ay sameeyaan wuxuu wax ku biirin karaa nidaamka, maadaama hadday ROM-ka ay fulinayaan ama ay hagaajinayaan wax ka maqnaa ama ku fashilmay nidaamka qalliinka, astaantan ayaa markaa lagu dari karaa FxOS lafteeda.
Intaa waxaa dheer, liisaska dirista iyo Kooxaha Google, ragga Mozilla had iyo jeer waxay dadka ku dhiirrigeliyaan inay iskaashi ku daraan "hal-abuurnimadooda" koodhka si toos ah, halkii ay ka eegi lahaayeen uun meel uun oo ay qaadan lahaayeen iyagoo aan waxba oranayn (taas oo ah haa, dareenku wuu ka duwan yahay).
Dib u eegista ayaa wanaagsan! Waxaan haystay mid kamida Samsungs-kii ugu horreeyay ee shaashadda waxyeelloobay waxaanan raadinayaa taleefan casri ah oo cusub oo la heli karo, waxaan arkay in firefox-ka OS uu aad u jaban yahay laakiin waxaan sugayay dib-u-eegis noocaan ah ka fikir waan iibsan doonaa 🙂
Dib u eegis aad u wanaagsan, waxaan haystaa ZTE Open dhowr maalmood (waa taleefankayga casriga ah) waana ku dari lahaa in muusigga muusigga xoogaa cagaaran yahay, kiiskeyga, waxaan heeso badan ku haystaa sd (+400), marka waa inaan fiiriyaa Dhexdooda ku jira barnaamijka muusiggu waa mid caajis ah (ma laha mashiin raadin) iyo liistada liistada ayaa yar oo aan wax laga beddeli karin. Daboolka barnaamijka laftiisa (wuxuu muujinayaa daboolka mawduucyada haddii ay leeyihiin) ma xuma laakiin wuxuu cunaa ilo badan markii aan kiiskayga u rogo.
Waa arrin cagaaran faahfaahinta sida fiidiyowga fiidiyowga (dhowr jeer ayuu igu dhacay dhawr maalmood gudahood) ama midka ku jira barnaamijka Isticmaalka ee aan ku tusin Wi-Fi baarka ogeysiiska.
In kasta oo aan dhihi karo biraawsarka ayaa i yaabay, waxaan ku raray bog leh gifs culus waxaanan dhex mariyey si fudud
Solidus pacheco dijo
Jawaab Solidus Pacheco
Qoraal aad u wanaagsan, kan ugu fiican.
Waxaan jeclaan lahaa inaan isku dayo inaan u soo ururiyo my Galaxy Mini Plus, laakiin nasiib daro pc-ga wuxuu ubaahan yahay xusuus badan iyo kuwa Heimdall, bedelka Odin (waa waxa loo isticmaalo in lagu xiro terminaalka asalka ROMS-ka iyo qaar wax laga badalay) ) waxay siisay taageero.
Way ka awood yartahay bartaada (AMRv6 CPU ee 836MHz iyo 286Mb oo RAM ah) laakiin wali waa in la tijaabiyo ...
On the Mozilla Wiki waxay ku leeyihiin in ARMv6 la taageeray, dadka kale waxay dhahaan maya ... Laakiin waad isku dayi kartaa. Xusuusnow inaad u baahan tahay jir yar oo waafaqsan ICS, haddii kale way fashilmaysaa.
Aragti ahaan, Cyanus Kernel (oo ah midka aan rakibo) waa inuu ahaado mid kufilan maadaama ay la jaan qaadi karto CyanogenMod 7 iyo 9 (iyo 7 waxay u dhigantaa ICS)
Maya, 7 waxay u dhigantaa Sanjabiilka (G waa xarafka 7aad ee alifbeetada), 9ka haduu yahay ICS. Laakiin haddii kernelku uu waafaqsan yahay, waa hagaag.
Shaqo wanaagsan, sugitaanka inaad tijaabiso nidaamkan.
Jawaab gonzalezmd (# Bik'it Bolom #)
Mid ka mid ah dib u eegista ugu wanaagsan ee aan halkaan ku soo arkay, aad u xun FiefoxOS ayaa ka raagsan tan hoose ee Samsung.
Si buuxda u buuxi dib u eegista!
Markii aan helo taleefan casri ah waxaan u maleynayaa inaan qaadan doono dawacadan yar <3
Ku jawaab Lupo
Red panda bro, casaan cas.
Ku jawaab gowend132
Hagaag taasi uma muuqato baandaal » https://blog.desdelinux.net/wp-content/uploads/2013/08/FFOS_320x480_000.jpg?73b396
Waxay ula jeedaa magaca Firefox tarjumaadiisa Isbaanishka, maahan astaanta lafteeda.
Waxaa jira codsi kuu oggolaanaya inaad isticmaasho raadinta iyo bilaabista (rasmi ah, maahan mawduuc) Firefox OS on Android. Magaceedu waa Waxkasta Guri (Beta). Waa wax fiican: http://goo.gl/PBlQcS
Ku jawaab Andrés Lazo
Waa maxay sababta aan loo daabicin taariikhaha aad ka tagtay Mexico? : /
Waxaan u maleynayaa inaan aqriyay inaan halkaas gaari doono dhamaadka sanadka. Iyo USA (oo leh hawl wadeeno), iyo dalal kale, waxay horey u ahaan laheyd sanadka soo socda.
Dib-u-eegis aad u fiican, oo aad uga qoto dheer sidii aan filayay markii uu imaylka ogeysiintu yimid. A 10 qoraaga!
Sida FirefoxOS lafteeda, waxaan jeclahay inay soo muuqatay. Markii ay Android soo baxday, waxaa jiray hadal hayn badan oo ku saabsan Linux kernel, oo la mid ah xorriyadda, haa, haa haa, ka dibna waxaan haysannaa Google xitaa maraqa, waxayna aad u daneynayaan xogteenna. Xaqiiqda in aasaaska Mozilla uu ku lug leeyahay kalsooni dheeraad ah, sida Firefox oo kale marka loo eego Chrome. Haa, ereyadaydu waa qoraal xiiso leh oo laga helo Windows, laakiin waxaan ku dhiiran lahaa inaan idhaahdo Android-kan ayaa aad uga xun (oh, sug! Mobile-kaygu waa Android iyo kaniina sidoo kale! XD).
Iyo inaan dhammeeyo marka la eego mowduuca caan ka ah codsiyada, waxaan gebi ahaanba ku raacsanahay wax kasta oo uu yidhi Nano. Waxaan isticmaalaa Facebook, iyo waliba WhatsApp, oo hadday aniga ahaan laheyd waxaan isticmaali lahaa Qurbajoog (aad baan uga tagay) iyo macmiil Jabber ah, yaase la xiriiri lahaa? Ma ahan saaxiibadeyda iyo qoyskeygaba, taasi waa hubaal
Waad ku mahadsan tahay solution xalka isgaarsiintu wuxuu noqon lahaa in Jabber loo isticmaalo wax walba. Sababtoo ah macmiil Jabber ah ayaa kuu oggolaanaya inaad kula sheekaysatid dadka server kasta ha ahaadeene, illaa iyo inta ay tahay Jabber. Tusaale ahaan, laga bilaabo GTalk waxaad wax ugu qori kartaa dadka isticmaalay Jabber nadiif ah, iyo taa lidkeed.
dhibaatada jirta ayaa ah hada ka wareejinta Gtalk una socota Hangouts mar dambe lama xiriiri kartid koontadaada Jabber XMPP oo xiriir la leh Hangouts, xitaa kuma dari kartid.
Nacalad Google iyo kali ahaantooda.
Waxaan hayaa akogo 'dukgo.com XMPP', waxaan ka fakarayay inaan ka tago Gtalk gebi ahaanba, laakiin maxay fiicantahay haddii dhammaan xiriiriyaashaydu isticmaalaan Hangouts?
Markii ay u wareegeen Hangouts, Pidgin wuu joojiyay shaqadii, laakiin dhawr maalmood ka dib, waxaan awooday inaan sii wado la xiriirka asxaabteyda anigoo adeegsanaya teknolojiyadda cusub ee Google.
Laakiin Pidgin wuxuu kaliya ka shaqeeyaa inta udhaxeysa xisaabaadka Google.
Haddii aad ku sameyso server kale oo XMPP ah, kuma jaan qaadi karo Hangouts cusub. Waxaan horeyba ugu tijaabiyay qofkasta oo adeegsada Jabber XMPP oo kujira Pidgin iyo mid kale oo koonto kuleh Gmail (Hangouts), waxaan isku dayaa inaan kudarsado xiriiro ama aan diro fariimo oo MA YIMAADAAN. laakiin haddii aan xisaabta Google dib ugu celiyo sheekadii hore (Gtalk), halkaas ayay ku shaqaysaa.
Ah haa, haa haa. Laakiin haye, timo ka timid Wolf. Kuwani Google iyaga oo wata kaligiis .. wiilasha p% $ # @, waa inay kugu dacweeyaan.
Francis D. dijo
Google iyo p ... ee iyagu dhalay.
Taasi waxay ahayd xishoodkii ugu xumaa ee la diro sanadka, ka takhalusida taageerada XMPP sababta oo ah xanaaqa Hangouts. Waxa ugu xun ayaa ah in dadku indho beelaan oo la qaado. taas oo keentay in dad badani ay ka casriyeeyaan Gtalk-kii hore una baxaan Hangouts.
In kasta oo aan isku dayo inaan raaco softiweer bilaash ah oo aan adeegsado server XMPP oo madax-bannaan, waxay iga dhigeysaa inuu iga dhammaado xiriirada iyo cid aan la sheekeysto.
Marka waxaa igu qasbay inaan isticmaalo Hangouts si aan ula xiriiro asxaabteyda.
Jawaab Franz D
Gmail wuxuu ku siinayaa suurtagalnimada inaad adeegsato XMPP ama Hangouts, waxaan ku sii wadaa XMPP noloshayda oo dhan waxaanan ku sii wadaa Gtalk anigoon cusboonaysiin Android 2.3.6.
laakiin goor dhow ama goor dambe, ogaanshaha Google, Hangouts waxay noqon doontaa qasab Gtalkna wuxuu ku dhammaan doonaa xidhitaanka
Runtu waxay tahay in wax kasta oo aan akhriyo, waxaan dareemayaa rabitaan ah inaan iibsado. Sida loo maleynayo, inay tahay OS ku saleysan html5, xaaladaha qaarkood waxay u dhaqmi doontaa sida (biraawsar) iyo xitaa in ka badan oo leh qeexitaanada ay leedahay Waxaan rajeyneynaa in Mozilla ay ka shaqeyn doonto cilladaha, maxaa yeelay Firefox OS go'an ayaa mustaqbal weyn leh.
Andrew Morelos dijo
Dib u eegis aad u wanaagsan, waxaan ku siganayaa inaan iibsado hektarka Alcatel OneTouch Fire
Ku jawaab Andres Morelos
Albaabka weyn Taasi waxay siinaysaa wicitaannada, marwooyin 😀
Jawaab Gaius Baltar
Markay nokia 500 iga fariisato nokia belle, waxaan rabaa inaan u wareego OS-gaan in badan aan ku tijaabinayay biraawsarka Firefox. → http://lamiradadelreplicante.com/2013/07/12/mozilla-anuncia-la-version-4-0-de-firefox-os-simulator/
Ma jiraa qof awood u yeeshay inuu ku rakibo Firefox OS-ka Samsung Galaxy Ace?
Waan ku faraxsanahay inaan sameeyo, laakiin waxaan ka baqayaa in taleefankayga gacanta uu noqdo miisaan miisaan leh.
Looma heli karo Ace, runti taleefanka kaliya ee leh processor ARMv6 ee leh waa Geeksphone Zero (deked aan rasmi ahayn). Tixgeli isla wixii aan u sheegay Son Link ee kor ku xusan.
Oo saw ma ahayn Firefox OS inay ahaato taleefoonada dhamaadka-hooseeya?
Dhibaatadu waxay tahay marka la barbardhigo, ARMv6 wuu ka da 'weyn yahay kana awood yar yahay ARMv7 / Cortex-A5. Taasi waa sababta hadda kaliya loo isticmaalo 'ARMv7' dhamaadka-hoose, iyo Mozilla sababtaas awgeed ayaa mudnaanta siineysa tusaalahaas. Intaa waxaa sii dheer, taageerida ARMv6 waxay (sii dheerayn kartaa) waxqabadka. Halkan waxaa ah fiidiyow si aad u aragto sida FxOS ay ugu shaqeyso ARMv6 http://www.youtube.com/watch?v=3GiUwtNkLGk
Kaliya in la yiraahdo labo shay: Boosto aad u fiican! oo waxaan rabaa qalabkeyga FirefoxOS!
Fariin heer sare ah, layaab dhab ah, sida Fifrefos OS waxay umuuqataa mid aad ufiican, waxaan rajeynaynaa in lagu rakibi karo on my galaxy mini yar oo lagu badalo cyanongenMOD, taas oo inkasta oo ay ka dheecaan badantahay android rasmi ah, kadib hadana wali waa android.
Salaan iyo qoraal fiican !!!
Waan ka xumahay, waxaan ula jeeday "Firefox OS"
Stephen 23 dijo
Qoraal wanaagsan, weyn great. Waxaan marhore raba inaan tijaabiyo nidaamka xD
Dib u eegis aad u fiican… ma dhacdaa inaad ogaato aaladaha qaadi kara nidaamkan?
Dib-u-eegid Fiican ee Firefox OS. Waxa kaliya ee xun ee ku saabsan Firefox OS ayaa ah inuu u gaar noqon doono Malestar (Sorry, Movistar).
Qabo, Iceweasel OS!
Waxay muujineysaa inaadan sameyn shaqada gurigaaga Eliot oo aad hadlaysid adoon ogeyn.
FxOS ma lahan qandaraas gaar ah cidna, caddaynta tani waxay tahay in soosaarayaal badan ay go'aansadeen inay ku sharxaan, iyaga ka mid ah, Foxconn.
Telefónica waa mid ka mid ah shirkadaha ku xiran ee gacan ka geysta horumarinta FxOS si loo helo cad, astaamaha ku habboon suuqgeynta, laakiin ma ahan wax xaddidan oo dhan iyo hawlwadeen kasta oo doonaya inuu ku biiro wuxuu si deggan u iibin karaa taleefannada soo-saare kasta oo adeegsada iyaga ku bixi hoostiisa kooxaha GSM ee ay adeegsadaan.
Nasiib darrose, laanta Peruvian ee Telefónica waxay bixisaa adeeg ka xun kuwa aan la liqi karin (ku dhowaad 30 doolar oo loogu talagalay 1 mbps oo laga tarjumay qiimaha lacagta maxalliga ah) waana midka hoggaamiya taleefanka oligopoly ee waddanka aan ku noolahay.
PS: Waxaan ka saarayaa cayayaanka aan ku bilaabay Firefox OS.
Maqaal wanaagsan, laakiin ka warran furitaanka shabakadda? Koodhka NCK? Bilaash waa bilaash ...
Taasi waa run.
Waxay kuxirantahay wadanka. Spain gudaheeda waxay siiyeen siideynta qofkasta oo doonaya, halkan Venezuela waxay yiraahdaan waa "sharci daro" (bullshit ...).
Tani waa dib u eegis sidii la rabay oo aan ahayn wax aan jirin. Shaqo aad u fiican. Android markii ay bilawday ee Donut waxay laheyd astaamo aad ugayar mana aysan cabanin waxbadan. Ha noolaado Firefox OS inkasta oo ay cabaadayaan kuwa aan jeclayn.
Maqaal aad u wanaagsan! Runtu waxay tahay Firefox OS ayaa dareenkeyga qabta waxaanan jeclaan lahaa inaan isku dayo, laakiin ma ogi haddii ay imaaneyso Argentina waqti uun si ay u eegaan.
Way qurux badan tahay, waan doonayaa oo keliya, waxaanan u malaynayaa inay tani noqonayso iibsashadayda xigta.
Waxaan rajeyneynaa in maalin uun aan ku badali karno nidaamkayaga android midka kan.
Maqaal wanaagsan. Waxay iga caawisay inaan wax badan ka barto Firefox OS. Waxaan jeclaan lahaa inaan isku dayo laakiin ma heli karo wax jaceyl ah HTC Bravo.
GOST POST! Haddii aan badbaadin lahayn kuwa ugu cadcad waan badbaadin lahaa.
Iyada oo tan loo adeegsanayo Firefox OS ayaa aniga uun igu qancisay. Ficil ahaan waxay leedahay waxa aan u baahanahay, waan jeclahay sida loo dhisay, waxay ka timid Mozilla ... waqti ayey ku qaadanaysaa sidii looga bixi lahaa Mexico.
Waa wax lagu farxo in la akhriyo dad aad u tiro badan oo isku dareen ah. Google waa Microsoft-da cusub! !
Ma jiraa codsi looga guuro Android oo loo raaco Firefox ama caddeyn ku saabsan dibin daabyada aniga oo kale ah?
Ka jawaab daadadka
Fool-proof ... Waa hagaag, si taxaddar leh u akhri dhowr jeerna wax walba u samee si tartiib ah xD Waxa kale oo aad u baahan tahay qalab isku habboon (diyaarinta iyo ururinta waxay qaadataa waqti dheer) si aad hal mar u rakibto.
Dib-u-eegis heer sare ah, aad ayaad ugu mahadsantahay inaad nala wadaagto khibradaada
Dib u eegis aad u wanaagsan ayaa lagu mahadiyey shaqadii weyneyd ee Auros uu u soo diray hambalyada !!, Hadda waxaan u maleynayaa in firefoxoskani uu leeyahay wax badan oo uu ku soo kordhin karo isla markaana uu u yimid inuu la dagaallamo nidaam cusub oo loogu talagalay taleefannada casriga ah ee ugu hooseeya, maxaa dhacaya haddii aan ka niyad jabo inay ahayd inay sameysay ma haysto whastapp Waxaan u maleynayaa in barnaamijkaas uu aad muhiim u yahay maalmahan, shaki la'aan, wiilasha mozilla waxay sii wadi doonaan inay horumariyaan OS-ga markaa waan arki karnaa wixii ay ku riyoon jireen ee casriga ah, salaan wiilasha Ariki
Gerson Lazaro C dijo
Waxaan raadinayey dib u eegis wanaagsan ee taleefankan maalmo, iyo gaar ahaan nidaamka qalliinka, ugu dambayntiina waan helay. Aad baad u mahadsantahay.
Jawaab Gerson Lázaro C
Dib u eegis aad u wanaagsan. Waxay umuuqataa inay tahay nidaam wanaagsan adeegsadayaasha kaliya ee isticmaala aasaasiga ah taleefannadooda casriga ah. Waa wax laga xumaado in wali aysan haysan codsiyo sida WhatsApp, oo wax badan ka caawin lahaa guusha OS. Marar badan ayaan ku arkay baraha bulshada weydiimo ay ka mid yihiin: "Waa maxay taleefanka ugu raqiisan ee WhatsApp leeyahay?
taas cakiskeeda, waa mahaddiis wanaag waxaa jira nidaam hawleed mobiil oo ka madax banaan xariifkaas WhatsApp, shabakad xmpp xiran oo xakameysan.
Taas awgeed, waxaa jira waxyaabo kale oo ka wanaagsan sida Xabber, Blem, Pidgin, Gajim, iwm
Aad baad ugu mahadsantahay maqaalkan, waxa ugu fiican ee aan arkay seen
Dib u eegid heer sare ah oo aad ka wada hadashay dhammaan qodobbada, waan sugi doonaa inay timaaddo Mexico si aan ugu tijaabiyo terminal OS-kan, habka aan sidoo kale isku dayay midna WebOS oo aan ka helay.
Lumia aan kor ku soo xusnay gabi ahaanba ma ahan meel hoose, waxay ku kacdaa qiyaastii 200 USD dalka Mexico.
Miyaanu ahayn maskuubka Firefox inuu ahaado baanda cas?
Sawirka waxaan ku arkaa dawaco.
Hagaag ... Ma garanayo waxaan dhaho ... In kasta oo loo malaynayo inay tahay panda cas, had iyo jeer waxaan u arkayay inay tahay dawaco, waxaanan filayaa inay hadda tahay dawaco.
dhakhtarka surubiologist dijo
Haddii ay panda ahayd bilowgii, miyaan lagu magacaabi lahayn Firepanda?
Marka laga reebo inaan dhaho waxaan u adeegsaday si ficil ah tan iyo markii ay soo baxday, foorjiguna marwalba wuu joogay
Ku jawaab suubiologo
Markii aan akhriyo faallo sidan oo kale ah, waxa ugu fiican ee aan sameyn karo waa fuulitaanka dusha sare ee dhismaha oo boodboodaya aniga oo aan ka fikirin laba jeer.
Dhaqtarka Surubiologist: Firefox (xayawaanku) wuxuu ka tirsan yahay qoyska reer Pandas, haa, waxay umuuqataa dawaco (malaha waa sababta magacaas), laakiin waa Panda.
Dib-u-eegista waa mid dhameystiran. Kaliya dhowr waxyaalood ayaa ka maqnaa iyo sawirada nidaamka hawsha.
Waxaan kugula talinayaa inaad cusbooneysiiso nooca nidaamka, si aad u aragto sida uu ugu fiicnaaday waxqabadka iyo muuqaalka.
Waxaan hayaa Alcatel One Touch Fire, oo leh Firefox 1.0.1, miyaad taqaan hab kasta oo lagu cusbooneysiiyo Firefox OS 1.1? Kama heli karo macluumaad badan Google: /
Ku jawaab gurzaf
Waa hagaag, cusbooneysiinta rasmiga ah ayaa loo maleynayaa inay timaaddo kahor sanadka dhammaadkiisa, laakiin haddii aad rabto wax badan waad ka soo ururin kartaa bakhaarka Mozilla B2G 😉
hello, sidee tahay adiga .. wanaagsan. Waxaan haystaa telefoon isku mid ah, waana mid aad u fiican .. xun. sawir ah mid muuqaalkiisu aad u sarreeyo oo si liidata loo naqshadeeyay M ee M *, mar kasta oo aan daarto .. ma taqaannaa sida looga saaro M inka dabka? ,,
Ku jawaab asdevian
Waa hagaag, haa, laakiin hawshu xoogaa way adag tahay ... Marka hore waa inaad xididdada ka dhigtaa aaladda, markaa waa inaad ka heshaa galka nidaamka meesha animation-ku ku keydsan yahay, kuna beddel mid cusub. Waad raaci kartaa tilmaamaha ZTE Pone, waa inay shaqeeyaan.
Ikhtiyaar kale ayaa ah in Firefox OS si toos ah loogu ururiyo Dabka, maadaama uusan keenin, Movistar animation 🙂
Waxaan haystaa lambarka taleefanka ee adiga iyo hooyadaa oo kale (hehehehe) waxaana ii soo baxday in sawirada aan ku qaado kaamirada aysan jixinjixin. Ma i caawin kartaa?
Waa hagaag taasi waa wax ka sii dhib badan. Xaqiiqdii waa barnaamijkaaga, waad hubin kartaa haddii aad cusbooneysiiso (midka ugu cusub waa 1.0.1-01003). Haddii kale, ka dib dib u soo celi Software-ka. Waxaan aaminsanahay in Alcatel uusan si toos ah ugu soo bandhigin softiweerka boggeeda, sidaa darteed ikhtiyaarka kaliya ee haray waa in lagu soo ururiyo gacantiisa (illaa aad xiriir fiican la leedahay iyo PC aad uga awood yar tahay ama ka yar tahay, waxay qaadan doontaa maalmo).
Waxaan rabaa inaan ogaado haddii aad soo dejisan karto khadka ama whatsapp? mise waa runtaa inaad dhigatid nidaamka android? sida?
Nidaam qalliin oo hubaal ballan qaadaya, waxaan iibsanayaa ZTE Open eBay si aan u noqdo hormuudka oo aan u arko sida ay u shaqeyso. Waxaan rabaa inaan qoyo 100%
Diana Gabriela Rengifo dijo
Laakiin markaa ... miyaad soo dejisan kartaa whatsaap ama maya? Shaki ka tag!
Jawaab u dir Diana Gabriela Rengifo
Waqtigaan la joogo ma jiro codsi rasmi ah oo WhatsApp ah, waxaa ku jira mid aan rasmi ahayn dukaanka ku yaal Beta. Sarkaalka waa inuu yimaadaa kahor sanadka dhammaadkiisa.
Iyo Line, ayaan ka hadlin arrinta. Waxaan u maleynayaa inaanan mustaqbalka dhow, laga yaabee sanad ama laba sano oo kale.
ma taqaanaa sida loo xidho alcatel one touch phone model ama sida loo furo
Ku jawaab wiki
Habka asalka ahi waa inuu la mid yahay kan ZTE Open, laakiin ma aanan isku dayin. Waa arrin raadis ah.
Hadda, sii deynta, waxaa jira durbaba bogag ay ku sii deynayso IMEI. Waxaa jira aalado ay tahay in loo isticmaalo in lagu sameeyo si bilaash ah, kuwaas oo laga iibsan karo internetka, sida furaha Sigma.
Qaado mozila OS, illaa taleefanka uu yahay genenia, fikradaha kala duwani waxay nagu hogaaminayaan inaan sii wadno maalin kasta, barnaamijka bilaashka ah wuxuu furaa wadooyin cusub, duullaanka daaqadaha taleefannada ayaa tagaya, waxaan u maleynayaa inaan mar labaad ku bilaabi karno mootada mozila os, oo aan aragno wax badan daaqadaha ayaa dhacaya oo maanta khatar ku haya taleefannadooda.
Ma ii sheegi kartaa haddii qof halkaan joogaa uu horay u rujin lahaa alcatel one touch fire ama haddii ay yaqaanaan sida loo sii daayo mahadsanid hore iyo daabacaad aad u wanaagsan
Ku jawaab Rolando
Maqaal aad u wanaagsan. Laakiin waxaa laga yaabaa inaad iloowday faahfaahin qaar. Waxaan hayaa alcatel onetouch leh firefox os 1.0. Mid ka mid ah cilladaha aanan fileynin ayaa ahayd awood la'aanta in lagu wareejiyo feylasha iyada oo loo marayo bluetooh, sida ku cad bogga rasmiga ah ee 'firefox blog' doorashadan waxay ku soo baxday qaabka 1.1. Cilad kale ayaa ah awood la'aanta in sawirro lagu soo rogo twitter iyo facebook. Waxaan rajeynayaa in cusbooneysiinta la heli karo. Mise waxaad u malayn in laga yaabo in dhibaatooyinkani ay yihiin cilado taleefanka gacanta oo aysan ahayn OS.
Ku jawaab mort
Hagaag waan diri karaa sawiro. Hadaad u jeedo noocyo kale oo feylal ah (heeso, cajalado, dukumiintiyo), iskama aanan dayin waxaanan u maleynayaa inaan weli la qaban karin Sidoo kale ma xasuusto inaan ku arkay taas 1.1 isbeddel.
Hadda, oo aan sawirro u soo raro Twitter iyo Facebook… waan sameyn karay, laakiin muddooyinkii dambe ma aanan dooneynin inaan soo dhejiyo sawirrada. Fikrad maleh sababta.
Haa haa, waa inay noqotaa dhibaatooyinka OS. Waxaan rajeyneynaa cusbooneysiintu inay xallin doonto.
Waxaan mar horeba raba inaan arko firefox oo ordaya.
Dr Byte dijo
Wanaagsan, qoraal aad ufiican waxaana rajeynayaa inay dhowaan soo saari doonaan barnaamijyo dheeri ah oo ku saabsan OS-kan cusub sidaasna kuweena sida aadka ah uga faa'iideysta
Jawaab Dr. Byte
Haye, waxaan rabaa inaad i caawiso. Waxaan dhibaato ku qabaa aaladda alcatel one touch firefox, ma aqaano sida loo dhigo muusigga ringtone-ga iyo farriinta. waxaa jira kaliya codad oooorriiiible ah mana doonayo inaan maqlo
Ku jawaab fadeexad
Hada ma awoodid. Waxaan rajeynayaa mustaqbalka sidaas.
Gabriel Soler dijo
Si fudud heer sare, waad ku mahadsan tahay dib-u-eegidgan. runtii aad u faa'iido badan, hadda waxaan diyaar u ahay inaan wax yar ka sii iibsado.
Jawaab Gabriel Soler
john mendez dijo
Waxaan u maleynayaa in dhammaan macluumaadka la bixiyay ay fiican yihiin, waxaan ku sigtay inaan iibsado ZTE waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii bilahaan ay jiraan wax isbeddello ah oo ku saabsan hagaajinta
Ku jawaab jhon mendez
Rogelio uriel dijo
Waad salaaman tahay, hadda waxaan iibsaday Alcatel One Touch Fire, waxaan haystaa qorshe xog xaddidan oo yar oo aan isku dayay, waxaan arkaa in isticmaalka uu aad u badan yahay marka aad internetka ka baareyso; Ma ogtahay sida aan u xaddidi karo codsiyada si otomaatig ah ugu xirnaanta internetka ama aan u xaddido qaar ka mid ah howlaha qalabka u baahan isticmaalka xogta internetka?
Waad ku mahadsan tahay horay ... ka bacdi
Jawaab Rogelio Uriel
yimid Chile: elaporte
Waxaan rajaynayaa inaan ku rakibo halkii nokia 701, maxaa yeelay Symbian Belle mar horeba wuu ka sii dabar go'ay, waxaan rajaynayaa in qof i caawiyo. post fiican !!
Jawaab u rooga ah
Wow, wakhti ayaad qaadatay!
Dib u eegis heer sare ah, hambalyo.
M @ rce dijo
Waxaan ku qiimeynayaa iibsashada OT ah FF OS, iyo warbixinta noocan ah (aad u fiican dhinaca kale) waxay gacan ka geysaneysaa helitaanka aasaasiga waqtiga dhameystirka soo iibsiga.
Waxaan kuugu hambalyeynayaa shaqada waana ku mahadsantahay macluumaadka.
Salaan ka timid Montevideo.
Jawaab M @ rce
Dib-u-eegidgan waxaa lagu sameeyay qaybta 1.0 ee FirefoxOS, hadda Alcatel waa la dhigi karaa ilaa 1.3, wax badan baa ka fiicnaaday, laakiin wax badan oo ku saabsan waxqabadka iyo xulashooyinka, labadaba xagga animations, taabashada, iwm.
Hadaad jeceshahay waxaad ku aqrisay boostada, usheeg inay maanta xitaa kafiican tahay 🙂
Salaan iyo mahadsanid faallooyinka.
PS: Waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso sawirro aan ku soo daabacno halkaan kombiyuutarrada leh FirefoxOS: https://blog.desdelinux.net/release-party-con-firefox-firefoxos-y-ubuntu-de-invitados/
Waxaan ku tijaabiyay Nexus 4 dhowr bilood ka hor iyo waliba aniga oo loo yaqaan 'Xperia neo V' oo waxaan ku idhi dabcan midka hore wuu ka fiican yahay kan labaad. Waxa intaa ka sii badan, aad ayaan u jeclaaday maxaa yeelay dhowr saacadood gudahood waxaan haystay taleefan casri ah oo wata dhammaan codsiyada aasaasiga ah. Laakiin sidaas oo ay tahay dhowr maalmood ka dib waxaan xaqiiqsaday ... in sida wanaagsan ee android u shaqeeyo, kan iga sarreeya xilligan ffOS ay ku dhacdo Ubuntu taabashada oo aan dhowr jeer isku dayay iyo inta xannuunsanba waa inaan ku laabto android. Laakiin haye, waan sii wadi doonaa tijaabinta nooc ka dib markii aan arko illaa iyo inta aan ka arkayo wax bisil.
Ku jawaab naadirllano
Waa maxay dib u eegista wanaagsan waxaanan sugayaa inay halkan ku timaaddo Argentina, markaa waan isku dayi karaa
Ku jawaab Katekyo
Dib u eegis aad u wanaagsan, hambalyo, waxaan qabaa su'aal, ma haysaa laydh haga oo tilmaamaya markay ogaysiisyadu yimaadaan sida telefoonnada casriga ah qaarkood?
SteeFaania ShaaUx dijo
Maya weli ma awoodo inaan sawir ka badbaadiyo biraawsarka adigoon xusuusta iska saarin. Fadlan i caawi ...
Jawaab SteeFaaniia ShaaUx
martin cartaya dijo
Dhibaato ayaan ku qabaa ztegeyga oo xiran oo aan bixin ama u oggolaanayn wicitaannada inay galaan, ku dheji qaabka diyaaradda ka dibna ka saar laakiin qaladku weli wuxuu sheegayaa inuu khilaaf ka dhexeeyo wicitaanka sugitaanka
Ku jawaab martin cartaya
Miyaad ii sheegi kartaa tillaabooyinka aan ku arko wan ee ku jira barxeybkayga dabka? waa dabka alcatel c
Jawaab biyo xidheen
Xubuntu 13.04 Post rakibida & Hagaajinta Guud